Mayelana NATHI | Izembatho zeHangzhouqiangwei CO., LTD
Izembatho zeHangzhouqiangwei CO., LTD
I-Hangzhouqiangwei clothing Co., Ltd.itholakala eDolobheni elihle laseHangzhou, esifundazweni saseZhejiang. Yasungulwa e1997 ngenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-11 million yuan. Ingqikithi yamasethi emishini engaphezu kwama-600, futhi ifakwe imishini yokugqoka ehambisanayo (njenge: umshini wokuthunga onejubane elikhulu, umshini wokunamathisela wokunamathisela, i-shear kagesi yase-United States). Ithuthukiswe yaba iqoqo lokuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa njengenye yebhizinisi lokukhiqiza okupakisha. Le nkampani inabasebenzi abangaphezu kuka-600, enendawo engaphansi kwamamitha-skwele ayi-10,000 nomthamo wokukhiqiza waminyaka yonke wamasethi ayi-1.2 wezigidi. Enye inkampani iphinde yasungula ngaphansi kwefektri efekethisiwe, imboni yezingubo engeyona eyoku-ayina.
Le nkampani ithole isitifiketi esikhethekile sokuvikela ukuphepha kwezimpahla zokuphepha kwabasebenzi se-State Administration of Work Safety kanye nelayisense yokukhiqiza umkhiqizo wezimboni kazwelonke, iZhejiang Safety Production Supervision Administration, kanye nesitifiketi seZhejiang Economic and Trade Commission sokuqoka impahla. Kuyibhizinisi lesikweletu lebhange le-AAA kanye nenkampani yokuqinisekisa ikhwalithi ye-ISO9001. Imodeli yokuphatha yenkampani iya ngokuya ihlanganiswa futhi yenziwa ifane.
Uchungechunge lwe- "WORK" lokugqoka okuchwepheshe olukhiqizwa yinkampani lunezimpawu zokumelana nomhuzuko, ukuwashwa kalula, nokushesha kombala okuqinile. Yethula uhlelo lwakamuva lwamazwe omhlaba lwezingubo ze-CAD lokuklama ngobungcweti. Enqubweni yokukhiqiza, landela ngokuqinile izindinganiso zikazwelonke ze- "GB 12014-2009 Clothing Anti-static" ne- "GB 8965.1-2009 Clothing Retardant Clothing".
Imikhiqizo yenkampani ithunyelwa kuzo zonke izingxenye zezwe nakuzo zonke izinhlobo zempilo. Kukhiqize kaninginingi izitayela ezahlukahlukene zezingubo zobungcweti ezinkampanini ezinkulu nezisemaphakathi ezicishe zibe yizinkulungwane zamandla, uphethiloli kanye nophethiloli, insimbi, ukukhiqizwa kwezimoto, amachweba wesitimela, ugwayi nezinye izimboni. Ukudumisa kwamakhasimende.